Miverina amin'ny enta-mavesatra indray izahay dia nampahafantatra an'ireo mpamaky anay ny fisoratana anarana dimy, amin'ity indray mitoraka ity dia avelantsika ny lalao rahampitso, izay afaka maka maimaim-poana tanteraka isika ary tsy manana fividianana anaty rindrambaiko. Ao amin'ity lahatsoratra ity no ahitantsika ny rindranasa handika lahatsoratra avy amin'ny sary, mpanova ho rakitra PDF, mpikirakira fanoratana matihanina, fampiharana mampifangaro mozika ary iray hafa mba tsy hanadinoanay ny asantsika isan'andro.
1 Sary handika
2 PDF Converter sy Printer Pro
3 Pocket Audio Notebook: Mpanoratra feo ary naoty
4 Ita - Lisitra iray - Manao App
5 WeDJ ho an'ny iPhone
Translate Photo no fampiharana tonga lafatra azonao atao adika ny lahatsoratra hitantsika ao amin'ny boky, antontan-taratasy, famantarana, na filazana…. Izy io dia mahazaka fiteny 90 mahery. Mila maka sarin'ilay lahatsoratra resahina fotsiny isika ary mampita azy amin'ny alàlan'ny Translate Photo mba hahazoana ny fandikana azy amin'ny fitenintsika. Ny Translate Photo dia misy vidiny mahazatra 4,99 euro ao amin'ny App Store.
PDF Converter sy Printer Pro
PDF Converter sy Printer Pro dia mamela antsika avadika ho rakitra PDF avy amin'ny sary, ho hafatra an-tsoratra, pejin-tranonkala, mailaka, atiny amin'ny clipboard, fifandraisana ary karazana rakitra hafa izay ananantsika amin'ny iPhone. Ny PDF Converter sy ny Printer Pro dia manana vidiny mahazatra 2,99 euro ao amin'ny App Store.
Pocket Audio Notebook: Mpanoratra feo ary naoty
Ity rindranasa ity dia mety ho an'ireo olona rehetra mila izany mila manana recorder eo an-tanana foana izy ireo ahafahan'izy ireo mandamina tsirairay avy amin'ny rakitsoratra nataony. Audio Notebook Pocket: Sound Recorder ary naoty dia manana vidiny mahazatra 1,99 euro.
Kitapo Audio Notebook€ 2,99
Ita - Lisitra iray - Manao App
Manampy antsika hahatakatra izany i Ita lisitra ary raiso an-tsoratra amin'ny fomba haingana, mora ary mahafinaritra. Raha vantany vao vita ireo asa voatanisa dia azontsika atao ny mamindra azy ireo any amin'ny fako, miampita azy ireo na manemotra azy ireo mba hahafahan'izy ireo mampandre antsika andro hafa. Ita dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 1,99 euro.
Ita - Lisitra Tianaomaimaim-poana
WeDJ ho an'ny iPhone
Toy ny azo hamarinina amin'ilay anarana, noho ity fampiharana ity dia ho azontsika atao manomboka manao ny dingana voalohany amin'ny maha DJ. WeDJ ho an'ny iPhone dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 0,99 euro.
WeDJ ho an'ny iPhonemaimaim-poana